China MINI excavator vagadziri uye vanotengesa | Dongheng Machinery
Zvimiro zveedu mini excavator
DZIMWE DZIMWE DZIMWE
APRON vhiri Kuwedzera-TYPE
KUSVIRA KWEMAHARA KUSHANDA
YEMAHARA UNHU OIL CYLINDER
Uye zvakare, masitaera asina mawindo anogamuchirwa zvakanaka kune vatengi veEuropean neAmerica.
KINGER mini crawler excavator inogadzirwa neakakwira kumisikidza Iyo inonunura simba uye mashandiro mune compact compact kuti ikubatsire iwe kushanda mune yakasimba kwazvo kunyorera. Zvinoenderana nebasa rakasiyana rinodiwa, mutengi anogonawo kusarudza akasiyana ekuvharira maturu kubva kuKINGER zvakabatanidzwa, senge pasi auger, hydraulic breaker, ruzhowa runogadzira, danda kubata, kukurumidza coupler nezvimwe.
With NACHI hydraulic pombi uye famba mota, PTM kufamba mota,Yanmar Injini,KYB kukosha kwekuparadzira, yedu KINGER mini excavator ine mashandiro akanaka mune akawanda mashandiro ezvinhu sekuvaka kwepurazi uye shanduko yemaguta.
Isu tinobvuma kubhadhara neT / T, kiredhiti kadhi, Western Union, MoneyGram, L / C nezvimwe.
Kana iyo odha iri 1pc, tinogona kuendesa zvinhu kuQingdao Port mukati memazuva makumi maviri mushure mekugamuchira iyo kubhadhara.Kana anopfuura mashanu pcs, ndapota taura nesu kuti uwane yakadzama nguva yekuendesa. Tinogona zvakare kuendesa zvinhu kune yako inodiwa chiteshi.
Isu tiri nyanzvi yekuvaka yekugadzira kweanopfuura makore gumi nerimwe.Zvese zvigadzirwa zvedu zvinowana CE fomu uye ISO chitupa chakakwira uye chakatsiga mhando. Uye zvakare, tinogamuchira OEM.
KINGER ane akaomarara R & D timu, inofungidzira pre-kutengesa sevhisi, mushure-kutengesa basa. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinogona kupa yakakwana seti yemhinduro.
Chero kudiwa kwaungave uine kunowana nekukurumidza mhinduro kubva kuna MAMBO.
Pamusoro pane yedu mini excavator kutaurwa uye kumisikidzwa kweako mareferensi.Mibvunzo ipi inogamuchirwa kuti utibate.Tinoshandisa zvese zvinounzwa zvemhando yepamusoro mota, pombi uye injini nezvimwe.
Pashure: Earth auger
Zvadaro: Dombo rinorwa
Tora Nhau Dzazvino Kubva Kwatiri